Ifoto yokuTyelelwa kweCal State Long Beach
by UMarisa uBenjamin
I-CSULB Uhambo lwezithombe - i-Cal State Long Beach
I-CSULB Campus (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
IYunivesithi yaseCalifornia, i-Long Beach yileyunivesithi enkulu kwiyunivesithi. I-campus ifumaneka kwicala elisempuma-mpuma apho i-Los Angeles County ihlangana ne-Orange County. I-CSULB yasungulwa ngowe-1949 ukuba isebenzise iMbali Yehlabathi yeMfazwe II yase-Orange County naseLos Angeles County. Namhlanje, i-campus ihamba ngaphezu kwamahektare angama-300 kwaye ikuphela kweekhilomitha ezintathu ukusuka kwi-Pacific Ocean.
I-campus ibizwa ngokuba yi "Beach". Ngomzimba wabafundi abangaphezu kwama-36,000, i-CSULB yenye yeyona yunivesithi enkulu e-California ngokubhalisa. I-CSULB iyiKholeji yezoBugcisa, iKholeji yoLawulo lwezeShishini, iKholeji yezeMfundo, iKholeji yezoBunjineli, iKholeji yezeMpilo kunye neeNkonzo zoLuntu, iKholeji yezobuLwazi boLuntu, iKholeji yeZendalo zeNzululwazi kunye neMathematika, kunye neKholeji yokuPhucula kunye neKholeji yeeMveli, LeMfundo. I-Long Beach State 49ers iqela lezemidlalo lidibanisa kwiNgqungquthela yaseBest West yeCandelo le-NCAA I. Imibala yesikolo ye-CSULB igolide kunye nomnyama, kwaye i-mascot yayo yiProspector Pete.
Walter Pyramid kwi-CSULB
UWalter Pyramid kwi-CSULB (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
IWalter Pyramid yindawo ye-stadium ye-multi-purpose multi-purpose, eyabonwa njengekhampasi. Ukugqitywa ngo-1994 nguDon Gibbs, i-Walter Pyramid yenye yezakhiwo ezintathu zepiramidi e-United States. Ibala lekhaya liya kubafazi be-49er kunye namabhinqa amabhasi ebhasikidi, kunye namaqela akwa-49er kunye namabhinqa e-volleyball.
Umbazi weCandelo loBugcisa
Umbazi weCandelo loBugcisa kwiCandelo le-CSULB (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
I-Crapenter yoBugcisa iZiko leyona ndawo ephambili ye-CSULB yomculo kunye nemidlalo yezobugcisa kunye namafilimu kunye nezifundo. Yakhelwe ngo-1994 yaye ikhona kufuphi neWalter Pyramid. Iziko leziko le-1,074 lihlala kwi-Long Beach Community Concert Association. Kwabizwa ngegama lika-CSULB alumni kunye nabaxhasi, abazalwana bakaRichard noKaren Carpenter.
I-CSULB Library (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Efumaneka ngaphesheya kwiKholeji yezobuLwazi boLwazi, i-CSULB yeThala leencwadi yilayibrari eyintloko kwi-campus. Iilayibrari zinezindlu ezininzi eziqokelelweyo ezibandakanya i-Ansel Adams kunye no-Edward Weston, kunye neencwadi ezinqabileyo ezivela kuVirginia Woolf, uRobinson Jeffers kunye noSamuel Taylor Coleridge. Ilayibrari ineenkcukacha zokufunda ezizimeleyo, iilebhu yekhompyutheni kunye nommandla wophando lweqela.
Union University Student Union
IYunivesithi yabafundi beYunivesithi kwi-CSULB (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
IYunivesithi yabaFundi beYunivesithi itholakala entliziyweni yekampus. Isakhiwo esinezitezi ezintathu senza umsebenzi wokufundisa abafundi kwi-Long Beach campus, ii-ofisi ezininzi, iindawo zokufunda kunye nenkundla yokutya ephakathi. Umanyano wabafundi unikezela ezonwabo ezifana ne-bowling, ichibi lokubhukuda, imidlalo ye-arcade, kunye namagumbi aqhelekileyo aneenkcukacha zeTV.
IYunivesithi yokutya kwi-University ye-CSULB (cofa umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
IYunivesithi iDining Plaza, eyaziwa ngokuba yiivenkile ezingama-49, iquka iDominos Pizza, iPanda Express kunye neSurf City Squeeze, isitolo se-smoothie. I-plaza ilapha ngaphandle kweYunivesithi yabafundi beYunivesithi.
I-Parkside Commons kwi-CSULB (cofa umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
I-Parkside Commons ihlala kwiihholo ezisi-9 zendawo zokuhlala. Zonke ii-suites ziquka amagumbi aphindwe asixhenxe ngamagumbi amabhinti amakhulu amakhulu. I-Sophomores kunye nabafundi abahlala e-Parkside Commons. Isakhiwo ngasinye sinekamelo lokuhlala kunye neTV, indawo yokuhlamba iimpahla kunye neendawo zokufunda.
Los Alamitos kunye neCritritos Hall
Iholo laseLos Alamitos kwi-CSULB (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Iholo laseLos Alamitos neCerritos Hall ziiholo ezimbini zokuhlala ezikufutshane nekampus. Izakhiwo zendlu zithathu zendlu izindlu ezingama-204 zizonke, zineendawo ezihlukeneyo namaphiko amadoda namabhinqa. Amagumbi okuhlala aphindwe kabini kunye nemvula yamanzi, zombini iiholo zikulungele ukukhetha iminyaka yokuqala. Ezi zombini iiholo zibonelela ngempahla yokuhlamba, amagumbi okuzonwabisa, kunye nokufunda i-lounges. I-Los Alamitos iquka indawo ebizwa ngokuba yi-Ground Floor ye-Seattle. Kukho intlanzi yokutya ekwabelwanayo phakathi kweehholo ezimbini.
Iziko loLonwabo lwaBafundi kunye neZiko loLimo
Iziko loLonwabo lwabaFundi kunye neZiko loLondolozo kwi-CSULB (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Kugqityiwe ngo-2007, iZiko loLonwabo lwabaFundi kunye neZobuchule i-126,500 indawo yokuzonwabisa yenyawo yecala ekhoyo kwicala lasempumalanga ye-CSULB campus. Iziko libonisa inkundla yokuzivocavoca enkundleni ezintathu, umzila wokugijima wangaphakathi, i-cardio kunye nezixhobo zokusebenza, isitya sokubhukuda, ama-spa, kunye namagumbi okusebenza ekusebenzeni kweqela.
Imyuziyam yoLondolozo lweeYunivesithi kwi-CSULB (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Iimyuziyam zoLondolozo lweeNyuvesi zeYunivesithi zibhekwa njengenye yezinto zokulondolozwa kwembali zobugcisa kwilizwe ngokubhekiselele kwi-Council Arts Council. Efumaneka ngaphesheya kweKholeji yoLawulo lwezeShishini, i-UAM ihlala iqokelele ngokusisigxina imisebenzi kunye neziqingqiweyo ezizodwa. Iimyuziyam iveza imibukiso emikhulu kulo nyaka ukuba ijongwe kwaye ifundwe ngabafundi kunye nabafundi bezobugcisa. I-UAM nayo ibamba amakhonsathi, iziganeko zegama ezithethiweyo, iintetho zegalari kunye neentetho kulo nyaka.
Brotman Hall kwi-CSULB (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Efumaneka kumzantsi weKholeji yoLawulo lwezeShishini, uBrtman Hall uyakwamkelwa kwiiyunivesiti kunye nee-ofisi zezoncedo lwezezimali, kunye neCandelo loPhuhliso loKhathalelo. Umthombo waseLyman Lough, enye yeenkcukacha ze-CSULB zeenkampu, ubingelela abafundi abaza kuBrmanman Hall.
Ikholeji yoLawulo lwezoRhwebo
Ikholeji ye-CSULB yoLawulo lwezoShishino (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Kutho nje ngasentla kweBrmanman Hall, iKholeji yoLawulo lwezoRhwebo unikezela iinqununu kwi-Akhawunti, kwiMali, kwiNkcukacha zoLwazi, kwiNkampani yoLuntu, kwiZifundo zezomthetho kwi-ishishini, uLawulo kunye ne-HRM, ukuThengiswa kunye noMphathi woLawulo lwezoRhwebo. Ikholeji likhaya kwikhungo le-Ukleja leNkokheli yobuNtu, ejolise ekufundiseni nasekukhuthazeni izigqibo eziphathekayo kwishishini.
IKholeji lezeMpilo kunye neNkonzo zoLuntu
Ikholeji ye-CSULB yezeMpilo kunye neenkonzo zoLuntu (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Ikholeji yezeMpilo kunye neNkonzo zoLuntu ivela kwiYunivesithi yabafundi beYunivesithi. Isikolo sikhaya kwiZiko loLungisa loLwaphulo-mthetho noQeqesho loPhando kunye neZiko loQeqesho loLuntu.
Ikholeji inika iiprogram kunye neeprogram zemfundo eziphambili kwiSebe elilandelayo: Ukukhathazeka kokuXhumana, uLungisa loLwaphulo-mthetho, iNzululwazi kunye neNzululwazi zabaThengi, uLondolozo lwezeMpilo, uLonwabo noLondolozo lwezeMpilo, iNzululwazi yezeMpilo, i-Kinesiology, iTransystem, kunye neenkqubo kwiSikolo Abahlengikazi kunye neSikole soLuntu.
Ikholeji ye-CSULB yobunjineli (cofa umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Ikholeji yezobunjineli itholakala ecaleni kweKholeji lezeMpilo kunye neeNkonzo zoLuntu. Ikholeji inika iiprogram kunye neeprogram zeemfundo eziphambili kwiSebe elilandelayo: Ubunjineli be-Aerospace, Ubunjineli beMichiza, Ubunjineli boLuntu, Ubunjineli beeKhompyutha, uLawulo lwezoBunjineli, uLawulo loMbane, kunye noBunjineli boMbane Abancinci kwiComputer Science Applications, i-Computer Science, Ubunjineli bendalo, kunye neWebhu kunye noLwazi lwezoBugcisa nazo ziyafumaneka kubafundi.
Ikholeji yoBugcisa ubuGcisa
Ikholeji ye-CSULB yobuGcisa boLwazi (cofa umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Ikholeji yoBugcisa boBugcisa yiyona ndlela ikhulu kwiikholeji ezisixhenxe kwi-CSULB. Kukho abafundi abangama-9,000 ababhalise kwiCLA. I-CLA inika ama-67 angama-majors kunye nabancinci kumasebe angamashumi amabini anesibhozo: i-Africana Studies, i-Anthropology, i-Asia ne-Asia yase-American Studies, i-Chicano ne-Latino Studies, Izifundo zoNxibelelwano, iiNkcukacha zeNxibelelwano, iiNkcubeko, iNgesi, iJografi, iMbali, uPhuhliso lweNtlalo, uLwazi loLwazi kunye noLwazi loLwazi, iiLwimi, ifilosofi, iNzululwazi yezopolitiko, i-Psychology, iZifundo zezeNkolo, izifundo zoBomi, iiNkcubeko, iiNkonzo zeTechnics, kunye neNkcubeko yeBesini kunye neZifundo zoSondo.
Ikholeji yoBugcisa kwi-CSULB (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Ikholeji yoBugcisa inika iinkqubo ze-Bachelor degree kwi-Art Education, i-History History, iFilimu, iMusic, iTheater, i-Design, iCeramics, iDrawing & Painting, i-Graphic Design, umfanekiso, imifanekiso, i-Printmaking, umfanekiso we-3-D. Ikholeji yezobuGcisa ibonisa igalari yezobugcisa ebonisa imibukiso yeqela labafundi kulo nyaka.
Isakhiwo soBomi bezeMpilo
Iziko leMelecular and Life Sciences kwi-CSULB (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Evuliwe ngo-2004, iCandelo leMolcular and Life Sciences laliyiyunivesithi yokuqala yesakhiwo senzululwazi kwiminyaka engama-40. Isakhiwo se-88,000 sq. Ft., Isakhiwo sezithathu sinekhaya kwikomiti yeChemistry, Biochemistry, kunye ne-Biology yeKholeji yeZendalo zeMveli kunye neMathematika. Isakhiwo siquka ii-laboratories ezingama-24 zophando, ii-lab labasema-20 kunye namaziko angama-46.
Isakhiwo soBuntu baseMcIntosh
Isakhiwo seMcIntosh kwi-CSULB (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Isakhiwo se-McIntosh yoBuntu baseKhaya sisekhaya leKholeji yeSebe le-Liberal Art kunye neofisi zezobugcisa. Yona isakhiwo eside kunazo zonke kwi-CSULB campus.
CSULB Central Quad (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
I-Central Quad ihlala entliziyweni ye-campus, ijikelezwe yiLayibrari ye-CSULB, iKholeji yoBugcisa boBugcisa, iKholeji yoBugcisa, kunye ne-McIntosh Humanities Building. Kuyo yonke imini, iCentral Quad iqhutywe kakhulu ngabafundi kunye namaqela abafundi, kunye nabahamba ngeenyawo.
I-CSULB School of Nursing (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Isikolo sinikela ngeCachelor Science and Master of Science kwi-Nursing. Zombini iinkqubo ziqinisekisiwe ngokupheleleyo yiKhomishoni ye-Collegiate Nursing Education ye-American Association of Nursing College kunye nokuvunyelwa nguRhulumente yiBhodi yaseCalifornia yobhaliso obhalisiweyo.
I-Tufts I-Tour Photo Photo
Loyola Marymount I-Photo Tour
Iikholeji ezili-10 neeYunivesithi kunye neetoni zeSikolo soMoya
Iikholeji zeFenway Consortium
IYunivesithi yaseSan Diego Photo Tour
Uphi iYunivithi yaseHarvard?
Uhambo lwe-UC Irvine
I-Yunivesithi yase-Arizona State University Photo Tour
Uthelekiso lweeDunivesithi ezinkulu eziThumi
Iziganeko ezi-6 apho isikolo esifanelekileyo sifumaneke khona
Iifom zokusebenzela ze-Back to School Setting Goal
Iingqinisiso eziSeko zoQoqosho
Nguwuphi uPapa wamaRoma Katolika?
Ukunqabela ukuhlawulwa kwezikolo ezikolweni
Iifom ezahlukeneyo zoMnqamlezo
Iimviwo zokuqala zeBakala leMatriki
I-10 I-Best Best-Sales Rap Albums
Ukulima Kwezityalo - Ixesha Elizayo lezoLimo?
'Iindaba ezimnandi' kunye nezinye izibhengezo zaseJapan eziqhelekileyo
Yintoni Ukuguqula Umdaniso?
Iyini iHolomu kaSolomon?
Inkcazo Inkcazo: Imizekelo yesiNgesi ngegrama
Ukudweba iikhodi zakho zeKrisimesi
Usuku lomama - Haha noHi
Yintoni iFund World Wildlife Fund?
Ubuzalwane kunye no-Sorority Rush - Ziziphi na?
Yintoni i-Aclace Acetic Acid?
I-extranjeros ayikho into efanelekileyo yokufumana
Ngaba Ngaba Abacwangcisi Bakhe Bafanele Babe Ziimathematika?
Iincwadi eziphezulu malunga neMbali ye-Kights Templar
Imyuziyam yoMmandla weMbali yeNdalo (Chicago, IL)
Iincwadi ezili-10 eziMnandi zoBathandi beMbali
I-10 Enkulu Imibhalo yokuQala iYozz Collection yakho